ရှာဖွေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော WordPress ဆိုဒ်တစ်ခုကိုမည်သို့စတင်မည်နည်း Martech Zone
As WordPress သည်စီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီများမှဒီဇိုင်းလှပသောဆိုဒ်များရှိသောကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှထပ်မံတောင်းဆိုမှုများကိုဆက်လက်ရရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့သည်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရန်လိုအပ်သော optimization ကင်းမဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်အကြောင်းအရာဗျူဟာများကိုမလုပ်ဆောင်မီ၎င်းတို့ကိုအကောင်းဘက်သို့ကူညီပေးခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ သင်၏ဆိုဒ်ကိုရှာမတွေ့ပါကပရီမီယံပါဝင်သောအရာများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အသုံးများမှုများစွာမရှိပါ။
WP ShrugWordPress အထောက်အကူပြု ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ပြည့်စုံလုံလောက်သောစာရင်းပြုစုထားပြီး၎င်းကိုဖတ်ရန်လွယ်ကူသည့်သတင်းအချက်အလက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများအား WordPress ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏စာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% ရောင်းချခြင်းမဟုတ်ပါ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များ)၊ သို့သော်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုလိုက်နာခြင်းသည်သင့်အားထိုနေရာတွင် ၉၉% လုံးလုံးအကျိုးပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုအုတ်မြစ်ကောင်းတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံး SEO ရလဒ်များအတွက် WordPress စတင်ရန်အကြံဥာဏ် ၁၀ ချက်ကိုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်သင်သည်မိမိကိုယ်ကို ဦး စွာစတင်နိုင်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် hosting - အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်များထဲမှ ကျနော်တို့ Flywheel ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ချစ်ကြတယ် သူတို့ရဲ့ virtual instances နှင့် cache တို့၏ speed သည်။ စီမံခန့်ခွဲသော WordPress host များကို WordPress စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အထူးတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးယေဘူယျ host များကဲ့သို့အထောက်အပံ့အပေါ်သင့်အားလမ်းလွဲစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
CDN - အကယ်၍ သင်၏အိမ်ရှင်သည်မကမ်းလှမ်းပါက အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက်တစ်ခုထည့်ခြင်း ဦး စားပေးဖြစ်သင့်သည်။ CDN များကသင်၏ static ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်သင်၏အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုရှာဖွေရန် browser နည်းပညာနှင့်ပထဝီဆိုင်ရာကွန်ယက်များ၏အားသာချက်ကိုရယူရန်ကူညီလိမ့်မည်။
SEO ဖော်ရွေအကြောင်းအရာ - စာမျက်နှာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆောင်ပုဒ်ဒီဇိုင်း ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုကောင်းမွန်သောစာမျက်နှာတစ်ခုဖြင့်တင်ပြရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ HTML5 markup၊ စာမျက်နှာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အညွှန်းနှင့်အခြားအရာများအားလုံးသည်သင့်အကြောင်းအရာသည်သင်၏အကြောင်းအရာသည် crawlers ရှာဖွေရန်အကြောင်းအရာများကို ဦး စားပေးပြီး algorithms ၏အားသာချက်ကိုမည်မျှအကျိုးသက်ရောက်သည်။
cache ထပ်မံ၍ Managed WordPress Provider အများစုသည်ခိုင်မာသည့် cache ယန္တရားတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အကယ်၍ သင်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မပါလျှင်၊ ကောင်းစွာထောက်ပံ့ပြီးရိုးရှင်းသော cache plugin အတွက်သင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ WP Rocket.
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား - အိုအို ကျွန်တော်ဟာ indexing အမျိုးအစားမရှိတဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးအစားများသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အဆင့်ဆင့်ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသို့တင်ပြရာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်ပြီးလွတ်လပ်သောစာမျက်နှာများသည်အခွင့်အလမ်းမရရှိနိုင်သည့်ကျယ်ပြန့်သောအသုံးအနှုန်းများဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးအစားစာမျက်နှာများရှိသည်။ ငါ noindex tag ကိုစာမျက်နှာများလေ့ရှိပါတယ်။
Tags: - noindex တံဆိပ်များနှင့် meta tags တွေကိုမထုတ်ဝေပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ themes များအတွက်ဒြပ်စင်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ထုတ်ဝေတဲ့တင်ပို့ချက်တိုင်းကကင်လုပ်ခိုင်းကိုလုံးဝအမှတ်အသားပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်အများစုသည်ဆောင်းပါးများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းရှာဖွေမှုကိုအသုံးချပြီးထိုဆောင်းပါးများကိုအမှတ်အသားပြုခြင်းက၎င်းတို့တွေ့ရှိမှုကိုသေချာစေသည်။
အမြဲတမ်းလင့်များ - တစ် ဦး ကစနစ်တကျ ပက်ကျိနှင့် Permalink optimized ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သည်သင်၏တင်ထားသောစာမူများနှင့်စာမျက်နှာများကိုရှာဖွေမှုတွင်မြင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာတွင်ရှာဖွေသူ၏အာရုံကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Permalink များကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတိုရန်ကြိုးစားပြီး post ကို slug ၁ မှ ၅ ခုအတွင်းမျိုသိပ် ထား၍ မလိုအပ်သောအသုံးအနှုန်းများဖယ်ရှားပေးသည်။
Spam မှတ်ချက်များ - WordPress မှ nofollow link များပေးထားသော်လည်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထုတ်ဝေရန်မှတ်ချက်များကိုဖွင့်ခြင်းသည်သင်၏ WordPress ဆိုဒ်ကို SPAM စက်ရုံသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှစကားဝိုင်းများကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးနေပုံပေါ်စေသည်။ သူတို့ကိုမထောက်ခံပါနှင့်။
ခေါင်းစဉ်များနှင့် Meta ဖော်ပြချက်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်များနှင့် meta ဖော်ပြချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သည်။ သတိရပါ, သင့်ခေါင်းစဉ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်နှင့်သင်၏အရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်သည် meta ဖော်ပြချက် ရှာဖွေနေသောသူသည်သင်၏ search engine ၏ရလဒ်တွင်သင်၏ link ကိုဘာကြောင့်နှိပ်သင့်သည်ဟူသောခိုင်မာသောအငြင်းပွားမှုဖြစ်သည် သင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာအပေါ်ပြုသကဲ့သို့သင်၏ခေါင်းစဉ်များနှင့် meta ဖော်ပြချက်အပေါ်အဖြစ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်!
XML ကိုမြေပုံအညွှန်း - တည်နေရာအသစ်တစ်ခုကိုလမ်းညွှန်မှုမရှိဘဲရှာတွေ့ဖူးပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ သင်၏ XML Sitemap သည်သင်၏အကြောင်းအရာတည်ရှိရာ၊ မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းနှင့်နောက်ဆုံးအခြေအနေနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။ site တိုင်း XML Sitemap ရှိရမည်! ခင်ဗျားကိုမှတ်မိဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ် သင့် robots.txt ဖိုင်ရှိ sitemap.
ငါစာရင်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံလိုလျှင်ငါအမျိုးအစားဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အကြံပေးချက်ကို tag နဲ့အောက်ပါထည့်ပါလိမ့်မယ်:
လူမှုရေးမြှင့်တင်ရေး - လူကြိုက်များမှုအပေါ် မူတည်၍ ဆိုဒ်များအဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ရှာတွေ့ရန်သင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုသည်။ ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ရာမင်းကိုရာထူးတိုးပေးရမယ်။ လူမှုရေးထုတ်ဝြေခင်းနှင့်လူမှုရေးဝေမျှခြင်းခလုတ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ထိထိရောက်ရောက်မျှဝေခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
webmaster များ - မည်သည့် WordPress ဆိုဒ်ကိုမဖွင့်ဘဲ Webmasters တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်၏ XML Sitemap ကိုခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲသင်၏ဆိုဒ်ကိုရှာရန်နှင့်ရည်ညွှန်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများမှသင့်အားကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုရန်တားဆီးနေသောသင်၏ site နှင့်ပါပြproblemsနာများကိုလည်းဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ သူတို့အားပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်သင်ကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်!
မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှု - ရှာဖွေမှုအသွားအလာအားလုံး၏ထက်ဝက်သည်ယခုအခါမိုဘိုင်းဖြစ်ပြီး Google ကနှစ်သက်သည် တုံ့ပြန်မှုကို web ဒီဇိုင်း။ မိုဘိုင်းအတွက်အသုံးမပြုသင့်ပါကသင်သည်ရှာဖွေမှုအတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ငါဤဆောင်းပါး၌တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုအသုံးပြု။ တာပါ။
Tags: cache ကိုcacheအမျိုးအစား optimizationCDNမှတ်ချက် spamအကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက်flywheelwordpress ဆိုဒ်ဖွင့်ပါmeta ဖော်ပြချက်meta tagမိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုPermalinkပက်ကျိ postseoseo ဖော်ရွေဆောင်ပုဒ်seo ဆောင်ပုဒ်seo ခေါင်းစဉ်ပက်ကျိလူမှုရေးခလုတ်များလူမှုရေးမြှင့်တင်ရေးလူမှုရေးထုတ်ဝေလူမှုရေးဝေစုခလုတ်များလူမှုရေးခွဲဝေမှုခလုတ်များspam မှတ်ချက်များtag ကို optimizationခေါင်းစဉ် optimizationwordpress cache ကိုwordpress အမျိုးအစားများwordpress ကို hostingwordpress စတင်ခြင်းwordpress ပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းwordpress Permalinkswordpress tags များwp ဒုံးပျံXML မြေပုံများseo
20:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 38
CDN: ငါ cloidflare CDN ကိုသုံးတယ်။ အဲဒါကမြန်ပြီးမြန်တယ်။ သငျသညျအဘယျသို့သင်အကြံပြုကြဘူးညွှန်ပြနိုင်လျှင်ငါတကယ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
Hosting - ငါ digitalocean ကိုသုံးနေတယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ hosting ပဲ။ ဒါပေမယ့်သူကဘယ်လို console လဲဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ ထိုအခြေအနေမျိုး၌သင်သည်ရလဒ်ကောင်းများရရှိလိမ့်မည်။
XML မြေပုံ - ဟုတ်ပါသည်။ အဲဒါအရမ်းအရေးကြီးပါတယ် ငါကျော်သွားသူတွေကိုနားမလည်နိုင် သင်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုမကောင်းနိုင်ပါ။ သို့သော်သင်၏ XML sitemap OK သည်ဆိုပါကသင်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသည်။
Canonical tags ကောဘယ်လိုလဲ။ မင်းအဲဒါကိုသုံးလား စာမျက်နှာ noindex, tags စာမျက်နှာများကဲ့သို့ဆိုလျှင် Canonical tags များကိုအသုံးပြုရန်သင်အကြံပြုပါသလား။
20:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 40
မင်္ဂလာပါကိုတိုок၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ Canonical tags တွေလုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ WordPress သည်၎င်းတို့အားစင်မြင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ထောက်ခံကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ ငါ Yoast ၏ SEO plugins ကို run ပြီးလိုအပ်ပါကပြင်ဆင်နိုင်သည်။
29:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 00
မှန်ပါတယ်၊ wordpress က canonical tag ကိုထောက်ပံ့သည်။ ယခု plugins များနှင့်ပေါင်းထည့်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်